မကွေး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဖွဲ့နှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံ - Yangon Media Group
တောင်တွင်းကြီး၊ ဇန်နဝါရီ ၂
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်း ကြီးမြို့နယ် ဗိဿနိုးရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်းရှိ ”ဓမ္မရွှေမိတ်ဆက်နန်းတွင်းကျောင်း” ဓမ္မာရုံတွင် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်အဖွဲ့နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူ ထုတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတာမှ အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင် ကြည်ညွန့်မှ လွှတ်တော်တွင်း အ တွေ့ကြုံများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး E-Government ဦး ဆောင်ကော်မတီဝင် ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် ဦးမြင့်ဆွေမှ တက်ရောက် လာသည့် ဒေသခံပြည်သူများအား E-Government တည်ဆောက် ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ဒေသခံပြည် သူများမှ ဒေသတွင်းလျှပ်စစ်မီးရရှိ စေရေး၊ လမ်းတံတားများအား အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ ဆည်မြောင်းတာတမံများအား ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ဆည်ရေသောက် ဧရိယာများ ရေရရှိစေရေးနှင့် ဒေ သဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ”အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အစိုးရအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးလိုပေမယ့် အပြည့်အဝ ပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အပေါ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ နားလည်ပေး စေလိုပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုက ပြော ကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဗိဿနိုး ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၁၁ ရွာမှဒေသခံပြည်သူ ၁ဝဝဝ ခန့်တက်ရောက် တွေ့ဆုံကြပြီး၊ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည့်အပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးများမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည် ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
ယူနက်စကို အဖွဲ့ကြီးမှ အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ နုတ်ထွက်
ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုနှင့် ကျပ်သိန်းငါးရာဆု အပါအဝင် ဆုလက်မှတ်ပေါင်း ၁ဝဝဝဝ ကျော်ကို ယခုလ ၃၁ ရ
အနည်းဆုံး လုပ်ခငွေကြေးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း မရပါက အများစုသဘောထားပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ချက??
တိုက်စစ် ပြဿနာအတွက် ပရီးမီးယားလိဂ် ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး အန်ဒီကာရိုးလ်အား ပေါင်နှစ်သန်းဖြင်?
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကြုံတွေ့နေရသည့် စိုးရိမ်ပူပန်စရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကျော်ဖြတ်ပြီး နေ?